အခု သင်ခဲ့ပြီးတာတွေက အ-သရဆုံး ပါဠိကြိယာအခြေခံပုဒ်တွေပါ..။
ပြန်ကြည့်လေ ပစ (paca) စရ (cara) သယ (saya) ဆိုတဲ့ ပုဒ်တွေမှာ အ (a) သရလေးတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတာ တွေ့လား…။ (တစ်ခြားလား တွေ့ကြရဲ့လား ပရိသတ်ကြီးရေ..။)
ဒီနေ့ သိစေချင်တာက အာ-သရဆုံး၊ ဧ-သရဆုံးနဲ့ သြ-သရဆုံးကြိယာအခြေခံပုဒ်တွေပါ..။
အာ-ဧ - နဲ့ သြ-သရဆုံး ကြိယာအခြေခံပုဒ်တွေကို ပစ္စုပ္ပန်ဝိဘတ်များနဲ့ စဉ်ကြည့်ကြမယ်॥။ ကြိယာအခြေခံပုဒ်တွေနဲ့ အတူ အရင်းအမြစ်ဓါတ် (Verbal Root)လေးတွေပါ တွဲပြီး ဖော်ပြလိုက်တယ်॥။ ရင်းနှီးသွားတာပေါ့လေ ။ မရှင်းရင်တော့ မေးဗျာ॥ ငုံစိစိတော့ လုပ်မနေနဲ့॥။ (နီးစပ်ရာမြို့ပြတိုင်းနိုင်ငံက ပါဠိတတ်ပွန်တဲ့ ဆရာတော်ဘုရားများကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း॥။ အခေါက်ခံရသော် ဆရာနဲ့ မဆိုင်… တိန်)
ဓါတ်(ကီ ) - ကြိယာအခြေခံပုဒ် = ကိဏာ(၀ယ်)
ဓါတ် (ဒိသ) ကြိယာအခြေခံပုဒ်=ဒေသေ (ဟောကြား)
ဓါတ် (ကရ) ကြိယာအခြေခံပုဒ်=ကရော (ပြုလုပ်)
အင်္ဂလိပ်စာမှာ ထူးခြားတဲ့ ကြိယာ (Irregular Verb)ဆိုတာ ရှိသလို ပါဠိမှာလည်း ရှိပါတယ်..။
တစ်ခြားကြယာပုဒ်တွေလို စဉ်လို့ မရတာမျိုးပေါ့..။ ဟောဒီမှာ ဒီမှာ ထူးခြားတဲ့ ကြိယာတွေပါ…။း)
အသ (ရှိ/ဖြစ်)၊ ဗြူ (ပြောဆို)၊ ဟန (သတ်ဖြတ်) ဆိုတဲ့ ကြိယာအခြေခံပုဒ်တွေကို ပစ္စုပ္ပန်ကာလအတွက် စဉ်ပြပေးလိုက်ပြီ..။
ရွှီး ရွှီး ရွှီး ခရာမှုတ်ပြီ..
ပေးထားတဲ့ ကြိယာတွေရဲ့ အခြေခံပုဒ်တွေကို ရွေးထုတ်ကြလေ..။ လေ့ကျင့်ရင်း အဓိပ္ပါယ်များကိုလည်း မှတ်သားကြစေ..။
ပါပုဏာတိ (ရောက်၏ ၊ချဉ်းကပ်၏)
1. ငါ အောင်မြင်တယ်။
2. သူတို့ ချဉ်းကပ်နေကြတယ်။
3. ငါတို့ကတော့ ပွားများအားထုတ်နေကြဆဲ..။
4. သူတို့ ခိုးနေကြပြီ..။
5. ငါတို့ကတော့ ဖုံးထားလိုက်ပြီ။
6. မင်း ရွေးချယ်..။
7. ငါတို့ နားထောင်နေကြတယ်..။
8. သူတို့ ပြေးကြပြီ။
9. ငါ ထိုင်ချလိုက်တယ်။
10. သူတို့ အိပ်နေကြတယ်.။
ပါဠိမှာက Simple Present Tense နဲ့ Present Continuous Tense ကို တစ်မျိုးတည်း ပေါင်းပြီး သုံးစွဲတယ်ဆိုတာလေး မှတ်ထားကြပေဦး..။
I go. နဲ့ I am going. ကို အဟံ ဂစ္ဆာမိ နဲ့ပဲ လုပ်ချလိုက်ပေရော..။
သီဟပူရ နှင့် ရွှေပြည်ကြီး၊ အောဇီးနှင့် အင်္ဂလန်။ ဂျပန်နှင့် အမေရိက အ၀၀ အတန်တန် နိုင်ငံစုံ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်လျက်ရှိပေသော်ငြား၊ ဗုဒ္ဓပါဝစနဆိုသဟာ၊ ပါဠိဘာသာစာပေစကား၌ သည်းသည်းလှုပ် အရည်ပျော်သင်ကြားလိုကြပေသည့် တပည့်ဒကာမတစ်စုနှင့် တကွ ဘုရားဒကာ ကျောင်းဒကာ၊ အခန်းငှားခဒကာ ၊အီးဗီဇာဒကာ၊ အင်တာနက်မိုဒမ်ဒကာ ၊ အပိုဟတ်ဒစ်က်စ်ဒကာ၊ ယာယီဖုန်းကဒ်ဒကာ၊ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ဒိုမိန်းဒကာ ဟူပေသည့် ခေတ်သစ်အမျိုးကောင်းသားတို့ အကျိုးများစိမ့်သောငှါ ကျမ်းစာထိုထိုမှ အပိုအလိုမရှိ ကူးချဘိလေသော ဓမ္မဂင်္ဂါ (ချွေးမထွက် ) ပါဠိသင်ခန်းစာတော်ကြီး အခန်း (၁၁)ကား ဤတွင်ပြီး၏။
ပုဒိအာနှင့် ပြည့်စုံရပါလို၏..(အခုတော့ မဟုတ်သေး..)